ما وراء الطبيعة - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Bulshada ما وراء الطبيعة
Dhaqan gobannimo aad u aragto, hadal wanaag aad u tidhi, iyo fal aad kuu la qumman ayaa mararka qaar dadka si kale u la muuqan kara oo ay tahay inaad tixgeliso qofkaas ama dadkaas wacyigiisa, hab-fikirkiisa, iyo qaab nololeedkiisaba.
Silsiladda la yidhaahdo “Maa waraa’a Addabiica” ee uu Dr. Axmed Tawfiiq uu qoray oo ah sheekooyin uu hummaagga ka allifay una badan sheekooyin baqdin iyo khuraafaad uu ka sameeyay qofka metelaya ama dhacdooyinka ay ku dheceen la dhaho Dr. Rifcat waxa uu ku sheegay in yar oo runtii i soo jiidatay.
Rifcat oo dhakhtar caalami ah noqday fadhigiisuna yahay Qaahira ayaa mar ku yara noqonaya tuuladii uu ku koray intaanu waxbarashada uga soo bixin.
Waxa weli halkaas ku nool hooyadiis iyo walaashiis oo si wanaag iyo jacayl ku dheehan ugu soo dhoweynaya gurigooda ka samaysan dhoobada sida guryaha kale ee tuulada.
Dhakhtarka oo aan malaha muddo soo booqan tuulada oo iska illaaway noloshii adkayd ayaa u fiirsanaya dayaca ka muuqda guriga iyo guud ahaan nolosha ay hooyadiis iyo walaashiis ku noolyihiin.
Waxa uu odhanayaa sifaynta xaaladda reerka kadib: anigu hadda waan awoodaa inaan guri u dhiso, arrimo badan oo ay u qalmaan oo nolosha u fudadeeyana aan u qabto…
Laakin wax uun aan indhaha hooyo ka dhex arko ayaa igu kellifaya inaan marba dib u dhigo waxqabadkaas. Xasaasiyaddeeda dheeraadka ah darteed waxaqabadkayga u ma arkayso wanaag ee waxay u qaadanaysaa inay kibir iyo islaweyni aan deegaankeeda iyo noloshooda iskala weynahay iyo xaqiraad aan tuuladooda xaqirayo inay arrintaasi igu kelliftay.
Dhowr jeer oo aan hadal aan idhi ay iigu jawaabtay ‘Waad is beddeshay’ ayaa igu dhalisay inaan wax badan ka fiirsado inaanan ku dhaqaaqin marka aan hooyo la joogo.
In uu hooyadiis qalbigeeda dhawro ayuu ka doorbidayaa in uu wax u qabto oo ‘labo daran mid dooro’ ayay ku noqonaysaa.
Waxa aan intan u soo qaatay sida ay muhiimka u tahay tixgelinta dadka aad wax u qabanayso sida ay wax u arkaan oo taada uun aadan fiirin.
WQ/ Cabdicasiis M. Jaamac
Previous articleFatxi Almiskiini oo ah filasoof reer Tuuniisiya ah baa qoray kitaab ciwaankiisu yahay
Next articleMidowga Yurub, Midowga Afrika, IGAD iyo QM war cusub ka soo saaray khilaafka madaxda Soomaalida